Waa maxay roob: sifooyinka, sameynta iyo noocyada | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 30/09/2021 10:00 | Saadaasha hawada
Waxaan u baranay roobka si joogta ah ama aan aad u badnayn iyadoo ku xiran meesha aan joogno Si kastaba ha ahaatee, dad badan ma oga waa maxay roob iyo sida loo soo saaro. Daruuraha waxay ka kooban yihiin tiro aad u badan oo dhibco biyo ah oo yaryar ah iyo kiristaalo baraf oo yaryar. Dhibcooyinkaan biyaha ah iyo kiristaalo baraf oo yaryar ayaa ka imanaya isbeddelka gobolka oo ka yimid uumiga biyaha una beddelaya dareeraha iyo adkaanta cufka hawada. Cufka hawada ayaa kor u kaca oo qaboojiya ilaa uu ka dhergo oo uu isu rogo dhibco biyo ah. Marka daruuraha ay ka buuxaan dhibco biyo ah oo xaaladaha deegaanku ay ku habboon yihiin, waxay ku soo degi doonaan qaab baraf, baraf ama roobdhagaxyaale ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa roobku yahay, astaamaha iyo asalka uu yahay.
1 Waa maxay roobku iyo sidee buu u samaysmaa
2 Noocyada roobka
3 Roobabku hadba nooca daruurta
Waa maxay roobku iyo sidee buu u samaysmaa
Marka hawada dushiisa kululaato, dhererkeedu wuu kordhayaa. Heerkulka troposphere -ku wuxuu hoos u dhacaa marka uu sare u sii kordho, taas oo ah, marka aan sare u kacno, ayaa qabowgu noqdaa, markaa marka cufka hawadu kor u kaco, wuxuu ku dhuftaa hawo qabow oo wuu dhergaa. Markay dheregto, waxay isku uruursataa dhibco yaryar oo biyo ah ama kiristaalo ah oo ku wareegsan walxo yaryar oo leh dhexroor ka yar laba micron, kuwaas oo loogu yeero nuclei condensation hygroscopic.
Marka dhibcaha biyuhu u hoggaansamaan nukleus -ka cufnaanta oo cufka hawada ee dushu uu sii kordhayo, waxaa samaysmi doona daruur toosan oo soo koreysa, maxaa yeelay xaddiga hawo cufan oo ciriiri ah ayaa ugu dambayn kordhin doonta dhererka. Daruuraha noocan ah oo ay samaysay xasillooni -darrada jawiga waxaa lagu magacaabaa cumulus humilis, iyo marka ay si qumman u koraan oo gaaraan dhumuc weyn (ku filan inay oggolaadaan marinka shucaaca qoraxda), waxaa loogu yeeraa daruuraha cumulonimbus.
Uumiga ku jira cufnaanta hawada cufan si uu ugu milmo dhibcaha biyaha, laba shuruudood waa in la buuxiyo: mid waa in cufnaanta hawadu si fiican u qabowday midna waa in ay jiraan burooyin ciriiri ah oo nuuga qoyaanka hawada.
Markay daruuraha samaysmaan, maxaa ka hortaagan inay soo saaraan roob, roobdhagaxle ama baraf, taas oo ah, nooc ka mid ah roobab? Sababtoo ah dib -u -cusboonaysiinta, dhibcaha yar -yar ee samaysma oo la hakiyo daruuraha ayaa bilaabi doona inay koraan, iyada oo ay ku baxayaan dhibco kale oo ay la kulmaan markay dhacaan. Asal ahaan, laba xoog ayaa ku dhaqma dhibic kasta: iska -caabbinta ay samaysay kor -u -socodka hawada sare iyo culayska dhibicda lafteeda.
Nooca roobka waxaa la siiyaa iyadoo loo eegayo qaabka iyo baaxadda dhibcaha biyaha ee soo dadajiya marka xaaladaha saxda ah la buuxiyo. Waxay noqon karaan qulqulo, roobab, roobab, baraf, baraf, roob, iwm.
Dhibicu waa a roob yar, dhibcihiisu aad bay u yar yihiin oo si siman bay u dhacaan. Guud ahaan, dhibcahan biyaha ah aad uma qoyaan dhulka, laakiin waxay ku xiran yihiin arrimo kale sida xawaaraha dabaysha iyo huurka qaraabo.
Roobku waa dhibicyo waaweyn oo biyo ah oo u muuqda inay si xoog leh ugu dhacaan waqti gaaban. Roobku guud ahaan wuxuu ka dhacaa meesha cadaadiska atmosfeerka dhaca oo sameeya xarun cadaadis hoose oo la yiraahdo duufaan. Roobabku waxay la xiriiraan daruuraha u eg cumulonimbus oo si degdeg ah u samaysma, si dhibcaha biyuhu u weynaadaan.
Roobku wuxuu kaloo noqon karaa qaab adag. Si taas loo sameeyo, kiristaalo baraf ah waa inay ku samaysmaan daruuraha ka sarreeya daruuraha, heerkulkuna aad buu u hooseeyaa (qiyaastii -40 ° C). Kiristaalo waxay ku kori kartaa heerkul aad u hooseeya iyada oo ay kharash ku tahay dhibcaha biyaha barafoobay (bilowga samayska barafka) ama adoo ku daraya kiristaalo kale si ay u sameeyaan baraf baraf. Markay gaaraan cabbirka saxda ah oo ay sabab u tahay cuf -cufnaanta, haddii xaaladaha deegaanku sax yihiin, waxay ka bixi karaan daruuraha waxayna soo saari karaan roob culus dusha sare.
Mararka qaarkood baraf ama baraf ka soo baxaya daruuraha, haddii ay la kulmaan lakab hawo diiran xilliga dayrta, ayaa dhalaalaysa intaanay dhulka gaarin, aakhirkana keenta roobab dareere ah.
Roobabku hadba nooca daruurta
Nooca roobku wuxuu inta badan ku xiran yahay xaaladaha deegaanka ee samayska daruuraha iyo nooca daruurta la sameeyay. Xaaladdan, noocyada ugu badan ee roobabku waa noocyada hore, kuwa dhulka iyo kuwa dabaylaha leh ama kuwa duufaanka ah.
Roobabka hore waa roobab la xiriira daruuraha iyo wejiyo (diiran iyo qabow). Isgoyska u dhexeeya dhinaca diirran iyo xagga hore ee qabow wuxuu sameeyaa daruuro wuxuuna soo saaraa roob hore. Marka tiro badan oo hawo qabow kor u riixdo oo dhaqaajiso cufnaanta diiran, qabow hore ayaa samaysma. Markay soo baxdo, way qaboojin doontaa waxayna samaysan doontaa daruuro. Markay tahay xagga hore ee diiran, cufka hawada diirrani wuxuu ku dul haaraamaa cufnaanta hawada qabow.
Marka samayska hore ee qabow dhaco, si caadi ah nooca daruurta samaysata waa a Cumulonimbus ama Altocumulus. Daruurahaani waxay u muuqdaan inay leeyihiin horumar ballaaran oo toosan, sidaas darteedna, waxay kicinayaan roobab xoog leh oo aad u sarreeya. Sidoo kale, cabirka dhibcaha ayaa aad uga ballaaran kan kuwa ku sameysma wejiga diiran.
Daruuraha ku sameysmaya wejiga diiran waxay leeyihiin qaab isku dheellitiran oo caadi ahaan ah Nimboestratus, Stratus, Stratocumulus. Sida caadiga ah, roobabka ka dhaca wejiyadan waa kuwo jilicsan, oo ah nooca qoyan.
Marka laga hadlayo roobka duufaanka, oo sidoo kale loo yaqaan 'nidaamyada wax soo saar', daruuraha waxay leeyihiin horumar badan oo toosan (Cumulonimbus) ee kaas oo soo saari doona roobab xoog leh oo muddo gaaban soconaya, badanaana ah kuwo mahiigaan ah.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto waxa roobku yahay iyo astaamaha lagu garto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay roob